Maxaa ka soo baxay Shirkii Amniga Gaalkacyo ee u dhaxeeyay Puntland iyo Galmudug? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka soo baxay Shirkii Amniga Gaalkacyo ee u dhaxeeyay Puntland iyo...
Maxaa ka soo baxay Shirkii Amniga Gaalkacyo ee u dhaxeeyay Puntland iyo Galmudug?
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Waxaa Arbacadii maanta magaalada Gaalkacyo kulan heer sare ah ku yeeshay laba wafdi oo ay kala hoggaaminayeen wasiirka Amniga Gudaha Galmudug iyo wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland.
Kulankan ayaa waxaa qeyb ka ahaa senatarro iyo xildhibaannada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo dhanka kale wasiirro iyo xildhibaanno ka kala socday maamullada Galmudug iyo Puntland.
Waxaa diiradda lagu saaray kulankan, iskaashiga dhanka amniga ee labada Dawlad Goboleed, xoojinta nabadda, xasiloonida magaalada Gaalkacyo iyo si wadajir ah la isaga kaashado la-dagaalamo Ururka Al-Shabaab.
Kulanka kadib ayaa waxaa shir jaraa’id wada qabtay labada Wasiir ee kala hogaaminaysay labada wafdi Md. Ahmed Macallin Fiqi wasiirka wasaaradda Amniga Galmudug iyo mudane Maxamed Dhabancad wasiirka wasaaradda Arrimaha Gudaha Puntland.
Labada wasiir ayaa sheegay, in labada dhinac ay si rasmi ah isugu waafaqeen in wadajir looga shaqeeyo amniga iyo xasiloonada gobolka Mudug, islamarkaana lala dagaalamo Ururka Al-Shabaab.